Muxuu Maurizio Sarri Ka Yidhi Heshiiska Rekoodhka Aduunka Ah Ee Ay Kooxdiisa Chelsea La Gaadhay Goolhayaha Bilbao Ee Kepa Arrizabalaga Iyo Bixitaanka Courtois Ee Madrid? - GOOL24.NET
Muxuu Maurizio Sarri Ka Yidhi Heshiiska Rekoodhka Aduunka Ah Ee Ay Kooxdiisa Chelsea La Gaadhay Goolhayaha Bilbao Ee Kepa Arrizabalaga Iyo Bixitaanka Courtois Ee Madrid?
Kooxda Chelsea ayaa heshiis buuxa la gaadhay goolhayaha xulka qaranka Spain iyo kooxda Athletic Bilbao ee Kepa Arrizabalaga waxayna Blues da’yarkan ku jabisay rekoodhkii suuqa kala iibsiga ee goolhayayaasha oo ay dhawaan Liverpool ku dhigtay heshiiskii Alisson Becker kaas oo hadda aan noqon doonin goolhayaha aduunka ugu qaalisan.
Chelsea ayay qasab ku noqotay in ay rekoodhka suuqa kala iibsiga ku jabiso saxiixa goolhaye Kepa Arrizabalaga kaas oo hadda qarka u saaran in uu dhamaystiro heshiiska rekoodhka aduunka ah ee uu Stamford Bridge ugu soo dhaqaaqayo waxaana xalaadan Blues ku kalifay markii uu goolhaye Courtois go’aan adag ku gaadhay in uu Real Madrid ku biirayo.
Chelsea ayaan awood badan lahayn maadaama oo heshiiska Courtois uu dhacayo dhamaadka xili ciyaareedka cusub ama 12 bilood kadib taas oo maamulka Chelsea ku riixday in ay raadsadaan goolhaye mustaqbal wayn ku leh kubbada cagta wuxuuna noqday Kepa Arrizabalaga.
Kooxda Real Madrid ayaa bishii January waxay Kepa Arrizabalaga kula wareegi kartay 20 milyan euros oo kaliya laakiin Zidane ayaa horaantii sanadkan iska diiday in Kepa uu ka soo dajiyo Bernabeu taas oo keentay in uu qalinka ku duugay heshiis cusub oo dhacaya 2025 kaas oo lagu burburin karo 80 milyan euros.
Fiidnimadii xalay goolhaye Kepa Arrizabalaga iyo wakiiladiisa Margarita Garay iyo Gustavo Canizares ayaa ka soo duulay magaalada Bilbao waxayna soo gaadheen caasimada Madrid halkaas oo ay uga sii gudbayaan magaalada London si loo dhamaystiro heshiiska 71.6 milyan giniga ah ee ay Blues kula soo heshiisay Kepa.
Kadib markii uu soo dhamaaday kulankii Chelsea ay rekoodhayaasha guusha kaga gaadhay kooxda Lyon ayaa Maurizio Sarri wax laga waydiiyay xaaladaha Thibaut Courtois iyo Kepa laakiin waxa uu doortay in aanu xaalada faah faahin ka sii bixin inkasta oo uu muujiyay dareen la fahmi karo.
Maurizio Sarri oo ugu horayn ka jawaabaya xaalada Thibaut Courtois ayaa yidhi: ” Waqti xaadirkan ma ogi, waxaan doonayaa in aan kooxdayda la hadlo kadib ayaanu go’aan ka gaadhi doonaa. Waxaan halkan u joogaa in aan kulankan ka hadlo”.
Markale Sarri oo ka jawaabaya heshiiska ay kooxdiisa Chelsea la gadhay goolhayaha Bilbao ee Kepa Arrizabalaga ayaa yidhi: “Haddii aanan waxba ka ogayn Courtois, dabcan waxba kama ogi Kepa. isaga waxaan hal sano ka hor ku arkay Napoli, aragtidaydii kowaad waxay ahayd in uu ahaa goolhaye da’yar oo aad u fiican, aad u da’yar laakiin aad u fiican”.
Chelsea ayaa hadda diyaar u ah in ay dhamaystirto heshiiska rekoodhka aduunka ah ee ay Kepa la soo gaadhay waxayna sidoo kale dhamaystiri doontaa heshiiska amaahda ah ee ay Real Madrid kaga heshay Kovavic kaas oo ka mid ah sababaha ay Madrid kooxda Chelsea ugu qancisay in ay Courtois ka iibiso.
Ugu danbayn Chelsea ayaa iibka Courtois ka heli doonta 35 milyan gini waxaana la filayaa in dhamaystirka heshiiskani uu qaadan doono ilaa khamiista iyada oo waraaqaha sharciga xidhiidhka kubbada cagta Spain uu sabab u noqon karo in heshiiskan dhamaystirkiisu gaadhi karo khamiista balse Kepa ayaa la filayaa in uu maanta soo gaadhi doono London.